यी महान पुरुष, जसले आफ्नी पत्निको करियरका लागि मन्त्री पद नै त्या*गिदिए ! – Butwal Sandesh
यी महान पुरुष, जसले आफ्नी पत्निको करियरका लागि मन्त्री पद नै त्या*गिदिए !
एजेन्सी । विश्वमा हेर्ने हो भने श्रीमानका लागि श्रीमतिले आफ्नो हरेक इच्छा चाहना त्याग्ने गर्छिन् । तर नर्वेमा यसको ठीक उल्टो भएको छ । नर्वेका यातायात मन्त्रीले आफ्नी श्रीमतीको करियरका लागि आफ्नो मन्त्री पद नै छोडेका छन् ।
ओल्सनले एक टेलिभिजन च्यानलसँग भने, ‘मन्त्रीको रुपमा काम गर्दाको अनुभव निकै शानदार रह्यो । वास्तवमा मैले चाहेको भए जिन्दगीभर मन्त्रीको रुपमा काम गर्न सक्थें । तर अब म त्यो अवस्थामा छु जहाँ सपना पूरा गर्ने पालो मेरी श्रीमतीको छ । ’
नर्वेमा सोसल मिडियामा मानिसहरुले उनको यो निर्णयलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् र यसलाई लैंगिक समानताको दिशामा एउटा ठूलो कदम भएको बताइरहेका छन् ।
त्यसै गरि, नेपालमा तेश्रो साताको लकडाउन चलिरहेको छ । सामान्य नागरिकदेखि सेलिव्रेटीसम्मले घरमा बसेर सरकारको निर्देशनलाई पालना गरिरहेका छन् । घरमा बस्दा इन्टरनेटको सुविधा हुनेहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त छन् ।
यस्तैमा नायिका पूजा शर्मा पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा सक्रिय छिन् । उनी फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा दैनिक रुपमा कुनै न कनै सामाग्री पोस्ट गरिरहेकी हुन्छिन् । बुधबार मात्रै आफ्नो टिमलाई मिस गरिरहेको स्टाटस पोस्ट गरेकी पूजाले बिहिबार भने व्यांग्यत्मक स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन् ।
‘कुकरलाई भुक्न देऊ, तरपनि राजा भनेको सिंह नै हो । स सना कुकुरहरु भुक्दैमा सिंहले फर्केर हेर्दैन्’, पूजाको यो स्टाटस कसलाई र कुन आशयमा लेखिन् ? त्यो उनैलाई थाहा होला । तर उनका शुभ चिन्तकले पूजालाई सिंहको संज्ञा दिएका छन् । कुकुर चाहिं को हुन् त ?